Momba ny GRACE - Grace Machinary CO., LTD
Grace Machinary CO., LTD
Ny GRACE dia mifototra amin'ny Jiangsu China, ary mitazona hatrany ny fivoaran'izao tontolo izao. Mifantoka amin'ny sehatry ny famokarana plastika sy fanodinana fitaovana, GRACE dia mpamatsy fitaovana fampidirana endrika, R&D, famokarana, varotra ary serivisy.
Birao any ivelany
Firenena sy faritra misy ny fandraharahana
Nanolotra vokatra sy serivisy isan-karazany ho an'ny mpanjifanay izahay avy amin'ny firenena sy faritra mihoatra ny 106. Izahay dia manohy manatsara hatrany ny vokatray miaraka amin'ny siansa, ny haitao ary ny "Vatan'olombelona". Ny vinanay dia ny ho mpamatsy fitaovana plastika ambony eto an-tany, miorina amin'ny fanahin'ity fitsipika ity, tsy vitan'ny hoe nanao izay tratry ny herintsika izahay hihaona amin'ny fangatahan'ny tsena, ary koa manamafy ny fifaninanana. amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny mpanjifa tsy misy fangarony, miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro amin'ny teknolojia, ny fahaizan'ny R&D, ny fizotry ny famokarana ary ny teknolojia bobongolo mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa isan-karazany. Faly izahay fa amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasan'ny mpanjifa, ny vokatray dia mitazona ny fanavaozana hatrany amin'ny hafainganam-pandehan'ny fitakiana isan-karazany.
Ny fikatsahantsika ireo vokatra matihanina dia manana traikefa amin'ny indostria maro hanompoana ny mpanjifa ho an'ny tanjona, amin'ny famolavolana sy fanamboarana ny vokatra dia hita taratra ny mety amin'ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny tsena.